नेपाल टेलिकमको ९ महिनाको नाफा ९ अर्ब ३१ करोड रुपैया, अघिल्लो बर्ष भन्दा १०.६५ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको नाफा अघिल्लो बर्ष भन्दा १०.६५ प्रतिशतले घटेर नौं अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । अघिल्लो बर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनीले १० अर्ब ४२ करोड..
​एनसेलले आज बुझायो नौं अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर
काठमाडौं । एनसेलले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर वापत नौं अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ आइतबार बुझाएको छ। कर दाखिलाका लागि एनसेलले बित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन सुरु गर्दै राजस्व दाखिला गर्न शुक्रबार नै केही..
​१० वर्षीय ह्याकरलाई १० हजार डलर पुरस्कार
वासिङ्टन । सामान्यतया कुनै वेबसाइट ह्याक गर्नु अपराध हो तर कहिलेकाहीँ त्यस्ता ह्याकरहरु सम्बन्धित वेबसाइटका लागि बरदान साबित हुन्छन् । त्यसैले ह्याकरहरु पुरस्कारका हकदार पनि हुन्छन् । अचम्मको कुरा त यो..
​विश्वमा कसले गर्‍यो मोबाइल फोनमा पहिलो पटक कुराकानी ?
काठमाडौं । बिश्व इतिहांसमा सन् १९७३ मा मोटोरोलाका इन्जिनियर मार्टिन कपूरले आफ्नो प्रतिद्धन्द्धी कम्पनीका कर्मचारीसंग पहिलोचोटी गरेको कुराकानी नै मोबाइल फोनमा गरिएको पहिलो कुराकानीको रुपमा लिइएको छ । त्यसको १० बर्षपछी..
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको आठौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले शेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को आयकर पछिको १४ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मुनाफा..
काठमाडौँ नेपाल टेलिकमले गत वर्षको भूकम्पमा परी दिवंगत भएकाहरुको स्मरण गर्दै चीर शान्तिको कामना गर्न २०७३ बैशाख १२ गते, आइतबार टुँडीखेलमा दीप प्रज्वलन तथा मधुर सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको..
काठमाडौ । नेपाल टेलिकमले अन्य सेवाप्रदायक संस्थाको तुलनामा आफूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, गुणस्तरीय सेवा दिन र ग्राहकमाझ लोकप्रिय बनाउन सुधारका मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत टेलिकमले आव २०७३-७४ मा..
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ‘फ्रिज’ भएर बसेको रू १२ अर्ब सदुपयोग हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको..
​नयाँ वर्षमा टाटाको ‘घमासान’ अफर
काठमाडौं । नयाँ वर्षको शुभ अवसरमा सिप्रदी ट्रेडिङ्गले टाटा गाडी प्रेमीहरुका लागि घमासान अफर ल्याएको छ । योजनाअन्तर्गत टाटाको जेस्ट, बोल्ट र स्टोर्म मध्ये कुनै पनि गाडी किन्दा ग्राहकले जेस्ट र..
काठमाडौं । युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको बहुमत सेयर मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई हस्तान्तरण गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै टेलियासोनेराले गत डिसेम्बरमा भएको सहमतिअनुसार रेनल्ड्स होल्डिङ्सको नाममा रहेको ६०.४ प्रतिशत..
सुबिसुको ‘नयाँ वर्षको बहार’ योजना
​काठमाडौँ । केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटर्वक सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केवलनेट प्रा लि ले नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा ‘सुबिसु नयाँ वर्षको बहार’ योजना ल्याएको छ। योजना अन्तर्गत कम्पनीले ग्राहकलाई Clear..
​नयाँ वर्षमा नेपाल टेलिकमले एसएमएसमा ५० प्रतिशत छुट, ५० रुपैयाँमा १०० एमबी डाटा फ्रि दिने
काठमाडौँ । नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा नेपाल टेलिकमले जिएसएम र सिडिएमए मोबाइलका ग्राहकहरुलाई दुई वटा अफर दिएको छ। टेलिकमका अनुसार जिएसएम र सिडिएमए मोबाइलबाट कम्पनीकै नेटवर्क भित्र एसएमएस गर्दा लाग्ने..
​एसएलसी दिएका विद्यार्थीलाई टेलिकमको अफर, ९० रुपैयामा सिम, ५० एमबि डाटा ६ सम्म चलाउन पाइने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसएलसी परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै विशेष योजना ल्याएको छ। योजनाअन्तर्गत विद्यार्थीले टेलिकमको ९० रुपैयाँमा जीएसएम प्रिपेड सिम कार्ड किन्न पाउने छन्। जसमा प्रतिमहिना ५० एमबी डाटा..
काठमाडौं । आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्र्तरगत आगामी बैशाख ४ र ६ गते नेपाल र नामिबियाबीच हुने खेलको टिकट इसेवाबाट किन्न पाइने भएको छ । अन्तराष्ट्रिस्तरको एकदिवशिय खेलका लागि..
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनमा ल्याउनेबारे बुधबार सम्झौता भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभाग, सफ्टेक फाउण्डेसन प्रालि, डिल्लीबजार, क्लाउड हिमालय प्रालि थापाथली र काठमाडौँ..
सुजुकीले ल्यायो नयाँ बर्षमा "ह्याप्पी न्यू कार" योजनामा ग्राहकले तीनलाख बचत गर्न सक्ने
काठमाडौं। सुजुकी मोटरले नयाँ बर्षको अवसरमा नयाँ ह्याप्पी न्यू कार योजना ल्याएको छ। सुजुकी मोटरको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिजि मोटोकर्पले नयाँ बर्ष २०७३ को अवसरमा यो योजना ल्याएको हो। कम्पनीले..
​नेपाल टेलिकमले ल्यायो एनटीप्रो सेवा, इन्टरनेट जोन भित्रबाट कल गर्दा पैसा नलाग्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ सेवाको रुपमा उपभोक्ताहरुलाई ‘एनटिप्रो’ सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । एनटिप्रो प्रयोग गरी स्वदेश तथा विदेशबाट जीएसएम नेटवर्क बाहिर भएका, तर इन्टरनेट जोनभित्र रहेको अवस्थामा..
काठमाडौं । मोबाइल उपकरण निर्माता हुआवेले बार्सिलोना क्लवका प्रसिद्ध फुटबल स्टार लियोनेल मेस्सिलाई आफ्नो कञ्जुमर विजनेश ग्रुपका लागि ग्लोबल ब्राण्ड एम्बेसेडरका रुपमा नियुक्त गरेको छ । ‘विशेषगरी, यूरोप, एसिया र ल्याटिन..
फ्री वाइफाइको सुविधाले रत्नपार्कमा आगन्तुक बढे
काठमाडौं। रत्नपार्कमा इन्टरनेट सुविधा सुरु भएसँगै रत्नपार्कमा अवलोकन गर्न आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । अन्य दिन भन्दा शनिबार २ सय बढी अवलोनकर्ता आएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका, रत्नपार्क तथा रानीपोखरी..
शुक्रबारदेखि रत्नपार्कमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा
काठमाडौं । राजधानीको मुटुमा रहेको रत्नपार्कमा सार्वसाधारणले शुक्रबारदेखि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् । रत्नपार्क तथा रानीपोखरी एकाइका सहायक प्रमुख उमेश भण्डारीका अनुसार रत्नपार्कलाई थप व्यवस्थित गरिएसँगै अवलोकनकर्ता लामो..
काठमाडौं । एक वर्षमा नेपालमा २२ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । खासगरी सेवाप्रदायकबीच सेवा विस्तार र बिक्रीमा बढेको प्रतिस्पर्धाले इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । हाल नेपालको कुल..
काठमाडौं । एनसेलका ग्राहकहरुले अब एउटै प्याकबाट भ्वाइस र डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्ने भएका छन् । एनसेलले नेपाली बजारमा पहिलो पटक भ्वाइस र डेटा बन्डल गरिएको दैनिक प्याक ‘ट्वान्टी-ट्वान्टी..
काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि ‘एनसेलको बहार, सबैलाई उपहार’ नामक नयाँ योजना ल्याएको छ, जस अन्र्तगत एनसेलका ग्राहकले अब ९० दिनसम्म हरेक दिन आकर्षक उपहार पाउन..
यूएइबाट नेपाल टेलिकममा कल गर्दा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौँ । यूएइको Etisalat कम्पनीको मोबाइलबाट नेपाल टेलिकमका कुनै पनि नम्बरमा अब प्रचलित दररेट भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो दरमा कल गर्न सकिने भएको छ। यस अनुसार Etisalat कम्पनीको मोबाइलबाट नेपाल टेलिकमद्वारा..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बुधबार देखि विदेशी पर्यटकहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षबाटै निःशुल्क रुपमा सिम कार्ड वितरण सुरु गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राई र सूचना तथा सञ्चार..
रमेश लम्साल काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेन नेपालको बिक्री प्रकरणका विषयमा सरकारी निकायले नै प्रष्ट धारणा नदिँदा समस्या पैदा भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले पटकपटक एनसेलको बिक्री वितरणका सम्बन्धमा प्रष्ट..
एनसेल खरिद गर्ने निर्णय एक्जियटाको साधारणसभाले स्वीकृत
क्वालालम्पुर । मलेसियन कम्पनी एक्जियटाको साधारणसभाले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एनसेल प्राली किन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । एक्जियटाको सञ्चालक समितिले गरेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने निर्णय साधारणसभाले भारि..
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले दुई महिनाभित्र सेवाको गुणस्तर सुधार्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् । टेलिकमको सेवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष..
बाह्रौं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा नेपाल टेलिकमको राजधानीमा प्रभातफेरी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्नो बाह्रौं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा कम्पनीका सेवाहरुको प्रचारप्रसार तथा व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बिहीबार प्रभातफेरी आयोजना गर्‍यो । काठमाडौं उपत्यकामा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रम बसन्तपुरबाट शुरु भई न्यूरोड, जमल,..
काठमाडौं । क्यान इन्फोटेक’ मा स्वयम्सेवक परिचालनका नाममा श्रमशोषण भएको व्यवस्थापनमा खटिएका युवायुवतीले गुनासो गरेका छन् । यही माघ १५ गतेदेखि भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनीमार्गमा सुरु भएको छदिने मेलामा ६५ जना स्वयम्सेवक व्यवस्थापनमा..
Results 402: You are at page 10 of 14